VANTAGE Aagagga Daraasadda | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waa maxay VANTAGE?
VANTAGE, barnaamijka Daraasaadka Aqoonta Sare ee Minnetonka, waa iskaashi firfircoon oo ka dhexeeya Dugsiga Sare ee Minnetonka iyo bulshada xirfadleyda ah. Ardayda doonaya inay helaan faham qoto dheer oo si firfircoon uga qaybqaata xirfad xirfad sare leh, VANTAGE waxay bixisaa barnaamij dhiirigelin leh, gacan-qabad leh, isku-darka koorsada adag iyo barashada ku-saleysan mashruuc ee jawiga xirfadeed ee iskaashiga leh.
VANTAGE wuxuu ardayda ku mashquuliyaa firfircoonaan, waxbarasho gacan-qabasho ah halkaasoo ay ku dalban karaan duruusta tacliinta ee ku habboon, dejinta adduunka dhabta ah. Ardaydu waxay isla markaaba arkaan muhiimadda ay u bartaan maaddo ay xiiseeyaan. La shaqaynta lataliyayaasha, kooxaha mashruuca iyo macallimiinta martida, ardayda waxay ogaadaan heer cusub oo dhiirigelin iyo wadashaqayn ah oo ay ku kasbadaan xirfadaha loogu talagalay inay ku fiicnaadaan goobta shaqada ee qarniga 21aad.
Laga bilaabo maalinta koowaad, ardayda VANTAGE waxay bannaanka ka joogaan goob xirfadeed. Macallimiinta martida, 1: 1 la taliyayaal, iyo mashruucyo xirfad-wadaag ah ayaa ah aasaaska koowaad ee waqtiga fasalka.
VANTAGE, macnaha, waa booska istiraatiijiyadeed. Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu meeleeyo istiraatiijiyad lagu meeleeyo ardayda faa'iido tartan u leh codsiyada kuliyada iyo shaqooyinka.
Ka soo bax arjigaaga kulleejyada adoo diiradda saaraaya qoraalkaaga mashruuc aad ku dhammaystirtay duurkaaga. Muuji kalgacal iyo khibrad meelaha aad dooratay.
Haddii aad qaadatid koorso VANTAGE ah oo ay kujirto Meelaynta Sare (AP), International Baccalaureate (IB) ama koorsooyinka guud, waxaad ku guuleysan kartaa VANTAGE maxaa yeelay waxbarida iyo qaababka waxbarashadu way kala duwan yihiin. Waa nooc waxbarasho oo naadir ah - dhab ah, la dabaqay, laxiriira iyo waaya aragnimo – oo si wanaagsan kuugu adeegi doonta kulliyadda oo keliya, laakiin sidoo kale mustaqbalka xirfaddaada. Waxaad la yaabi doontaa inta aad ku guuleysan karto markaad si firfircoon ugu hawlan tahay oo aad u xiisaynayso shaqada koorsada.
U meelee naftaada shaqooyinka mustaqbalka ee ku soo noqo shaqo xirfadeed iyo khibrad xirfadeed oo naadir ah oo aan lagu arag kuwa ka hooseeya shahaadada koowaad. Tan ka sii muhiimsan, hel kalsoonida, xirfadaha wada xiriirka, akhlaaqda shaqada iyo xirfada aad ubaahantahay inaad guuleysato.